Aya ndiwo maitiro angave Super Mario Mhanya mune freemium vhezheni | IPhone nhau
Aya ndiwo mashandisiro anoita Super Mario Run mune freemium vhezheni
Karim Hmeidan | | IPhone mitambo, Noticias
Mazuva mashoma apfuura ndakakuudza kuti Nintendo anga achitanga kubvunza vamwe vatambi ve Super Mario Run pamusoro pemutengo wavaizoisa paSuper Mario Run uye pane zvingangodaro shanduro nyowani dzemutambo. Uye ndizvozvo, kuti Nintendo afunga kumaka iyi nyowani, uye inotarisirwa, Super Mario Mhanya nayo € 9.99 sezvo chiri chinhu chisina kufarirwa nemunhu wese. Hongu, tinogona kurodhaunura mahara kubva kuApple Chitoro asi isu hatizokwanise kuenda kubva kunyika yekutanga kana tikasapfuura mubhokisi. Hongu zvirokwazvo, ukangobhadhara, unokanganwa nezvezvimwe zvikwereti.
Uye unoda kuti ndikuudze chii, Kubva mumaonero angu izvi kubudiriraTinokanganwa kubhadhara nguva dzese dzatinoda kufambira mberi semimwe mitambo yakawanda muApp Store, pano isu tinobhadhara uye tine mutambo uzere. Nekuti, Unogona here kufungidzira kuti zvingave zvakaita sei kuve nerusununguko Super Mario Run ine micropayments? ...
Iwe unongofanirwa kutarisa pamufananidzo uyo unotungamira posvo, a mufananidzo wakagadzirwa nemushandisi weTwitter iyo yatinoona mamwe masikirini anogona kunge ari eSuper Mario Run mune yemutambo modhi freemium. Hongu, hatidi kudaro kubhadhara, asi isu taibhadhara kufambira mberi nhanho, kuwana maToads, mujaho neshamwari…. Uye kwete izvo chete, unoyeuka zvese izvo vanhu vakakutumira mamiririri eCandy Crush mazuva eseNekuti wakapihwa simba reSuper Mario Run, hazvingashamise kuti ako masocial network ave akazadzwa nezviziviso zvinotikoka kuti titaurirane neSuper Mario Run.
Saka ikozvino unoziva, tora iyo nyowani Super Mario Run, Edza zvirinani uye sarudza kana zvakakodzera kubhadhara iyo € 9.99 zvinodhura kuvhura zvese zvirimo mumutambo. Kubva pakuona kwangu kwanga kuchikosha, uye kwave kuchikosha, saka kana iwe usingade mutambo ingo bvisa iyo app, kutisiira isu mukana wekuyedza iwo matatu ekutanga nhanho.
Super Mario Runvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Aya ndiwo mashandisiro anoita Super Mario Run mune freemium vhezheni
Alberto Gonzalez Cadenas chinobata mufananidzo akadaro
Ini ndinonzwisisa kuti Nintendo anofanira kuita imwe purofiti kubva mukuvandudzwa kwemutambo wevhidhiyo. Zvinoratidzika zvine musoro kwandiri. Zvino, pamwe dambudziko harisi rekuti mutambo unobhadharwa kana kwete. Mushure mezvose, kune mitambo yakanaka kwazvo kunze uko inobhadharwa. Zvichida dambudziko nderekuda kubhadharisa € 10 yemutambo uyo usati wakakodzera ... Pamwe dai mutengo wacho waive wakaenzana nenhanho yekusimudzira mutambo (€ 3 pamwe?) Ipapo ingadai isina kuunganidzwa akawanda kutsoropodza.
Mushure mezvose, mangani mitambo irimo muApp Store iyo inodhura iyo? Iko kune, hongu, asi ndeipi yakajeka mifananidzo yavanayo? Zvakakosha here? Ndekupi kushoropodza kwavanako kana mushandisi ratings yavanowana?
Ini ndinonzwisisa kuti piracy idambudziko (kunyange izvi neIOS zvakati wandei uye zvisina kujairika ndinofunga). Imwe nguva yapfuura pakanga pasina nzvimbo dzakabhadharwa AppStore kunyorera dzakaburitswa kuitira kuisa pirated software ... Zvisinei, isu tiri mune imwechete kesi inoitika neinema. Vangani vanhu vanogunun'una nezvemutengo wetikiti remuvhi? Uye inobudirira sei nguva dzese apo bhaisikopo rinoitwa uye mutengo unodzikira ku1 / 3 kana pasi pemutengo wenguva dzose? Vanhu vangani vanoenda ipapo? Kuongororai kunoitwa nevanhu mumazuva iwayo? Ndeapi mabhenefiti ayo emitambo emamuvhi anowana? Pamwe dai mutengo wechigadzirwa waive maererano nemhando yawo, vanhu vaizofara kubhadhara mutambo wakadai uye zvaisazowana ongororo dzakaipa zvakadaro.
Pamwe Nintendo atadza kuwana chiyero pakati pemutengo / mhando. Uye pamwe vaizowana mari yakawanda kana vakadzikisa mutengo kusvika pa1 / 3 yemutengo wazvino. Zvichida paizove nekana kutengesa uye ivo vachiri kuita imwe purofiti. Asi hei, ndicho chisarudzo chako chinoremekedzwa. Kune yangu chikamu, ini handina kana kutombonetseka nekutora mutambo. Izvo hazvindipe chero chinhu.
Pindura kuna Alberto Gonzalez Cadenas
Ameni kumashoko apfuura. Icho chikonzero chenyunyuto kana hurukuro haisi yekubhadhara iyo app, asi mutengo maererano nekuvandudzwa kwemutambo. Ini ndaizobhadhara yakakwira € 4 yemutambo mushure mekuyedza.
Itsva iPhone 8 pfungwa ine Kubata Bar